Wararka - Waa maxay kabbadaha farta?
Kabayga farta ayaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo farta dhaawacan. Shaqadeeda ugu weyni waa inay farta sii hayso oo ay ka ilaaliso farta inay foorarsato. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ka caawin kartaa farta inuu ka soo kabto arthritis-ka, qalliinka, qalliinka, iwm, ama sababo kale. . Kabarooyinka farta laga sameeyay ee gacanta laga sameeyay ayaa badanaa laga sameeyaa bir ama caag. Kabo guryo lagu sameeyo ayaa laga samayn karaa ku dhowaad shay kasta oo fidsan, oo ay ku jiraan alwaax.
Haddii farta jaban aan la sixi karin, waxay sababi kartaa bogsasho lafo aan caadi ahayn.
Farta jaban ama murgacatay ayaa laga yaabaa inay bararaan oo xanuun yeeshaan. Dhaawaca noocan ah wuxuu ku yimaadaa jajabinta, jajabka, ama foorarsiga farta. Faraha jaban iyo murgacashada badanaa uma baahna kab. Kabo kabashada faraha ayaa laga iibsan karaa miiska ama ay dhigayaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaad.
Kabta farta fudud waa kabniinka. Karanka, ku dheji farta dhaawacan iyo farta ugu dhow ee aan dhawacmin. Cajaladdu waxay sugtaa labada farood si looga ilaaliyo inay kala foogan yihiin. Farsamadan fiiqista farta fudud ayaa badanaa loo isticmaalaa dhaawacyada jilibka farta. Waxay sidoo kale ku habboon tahay daaweynta kala-baxa murgacashada ama murgacashada oo ay keento cidhiidhiga farta.
Faraha murgooda badanaa uma baahna kabka.
Cajaladda waa in la dhajiyaa kor iyo hoos aagga dhaawaca. Marka farta giraantu dhaawacanto, farta ugu yar waa in loo adeegsadaa hagaajinta cajaladda. Tani waxay ka ilaalin doontaa farta yar waxyeelada. Faraha kala-baxa ah looma isticmaali karo jab.
Dadka xidhan kab-kabashada farta.
Dhaawacyada jilibka ama jabka, isticmaal kabo kab ah oo far ah. Kabayga istaatigga ahi wuxuu u ekaanayaa qaabka farta wuxuuna ilaaliyaa farta markay bogsanayso. Kabaygan ayaa u oggolaanaya farta oo lagu bogsado ugufiican. Kabay istaatiko ah waxaa badanaa laga sameeyaa bir jilicsan oo leh dhinac dahaadh jilicsan. Kabaha qaar waxaa lagu dhejiyaa oo keliya faraha hoostooda, halka kabo kale ay gebi ahaanba duubaan faraha si ay u sii difaacaan faraha.
Kabay isdabajoog ah ayaa la isticmaali karaa marka xaalado caafimaad oo kala duwan ay ku qasbaan kala-goysyada faraha ugu dhow ciddiyaha inay si isdaba joog ah u laabmaan. Kabay iyo farta oo mari marinka qaloocsan. Waxay ku qasbeysaa kala-goysyada inay ku sii jiraan meel aan qaloocnayn iyada oo u oggolaanaysa kala-goysyada kale inay si xor ah u foorarsadaan. Kabay kabood isdabajoog ah ayaa laga sameeyaa caag.
Kala-bixidda faraha ee firfircoon waxay siisaa gargaarka ugu fiican muddada-dheer ee faraha murgacan ee arthritic. Bir, xumbo, kabani waxay ka samaysan tahay caag. Bukaanku badanaa waxay xirtaan habeenkii markay seexdaan. Qalabka guga wuxuu hagaajin karaa fiditaanka faraha.
Kabay is-samee ah ayaa lagu dhajiyay farta dhaawacan hoostiisa si loogu daweeyo murgacasho iyo dhaawacyo yaryar. Ulaha alwaaxa fidsan ee salka ku haya waa cabir wanaagsan iyo qaab loogu talagalay kabniinka guriga lagu sameeyo. Haddii farta dhaawacan ay qaab daran tahay oo wali xanuun ama kabuubyo qabto hal saac oo nasasho ah ka dib, waa inaad raadsataa daryeel caafimaad.